Andro: 16 Novambra 2019
Tetikasa fitateram-bahoaka Rail eny amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny TCDD sy ny governemanta eo an-toerana
Tetikasa fitateram-bahoaka Rail eny amin'ny fiaraha-miasa amin'ny TCDD sy ny Governemanta eo an-toerana; Ny Repoblikan'i Torkia State lalamby sy ny Metro faneva amin'ny fitaterana an-drenivohitra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny manam-pahefana eo an-toerana mba ho azo antoka ny fitaterana mpandeha Raha toa ianao ka nifidy [More ...]
Atrikasa fanombohana ankapobeny momba ny TCDD; Ny atrik'asa fanombohana CD sy ny fanadihadian'ny CD Fenerbah ao amin'ny TCDD Fenerbahçe Fanofanana momba ny fiofanana sy ny fihainoana dia nanomboka teo ambany fitarihan'ny filohan'ny TCDD General Manager Ali İhsan Uygun. Republic of Madagascar [More ...]
Keltepe Ski Centre sy Pond Eğriova
Ny governoran'i Karabük Fuat Gürel, niaraka tamin'ny solombavambahoaka dia nahita ny fanadihadiana an'i Keltepe Ski Center Egriova Pond. Governemanta Fuat Gurel, solombavambahoaka Karabuk dia Cumhur Unal, Niyazi Gunes ary Dr. Hüseyin Avni Aksoy, General General [More ...]
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny YHT, hitombo ny isan'ireo mpizahatany any Sivas ho 3
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny YHT, hitombo ny isan'ireo mpizahatany any Sivas ho 3; Fitsidihana sy famotopotorana nanomboka ny andro talohan'ny Filohan'ny Fihaonambe Grand Sivas. Dr. Mustafa Şentop, fiaran-dalamby haingam-pandeha izay haasa tsy ho ela. [More ...]
Valiny amin'ny lalàna TCDD: 'Hanafina ny tompon'andraikitra' izy ireo
Ny minisiteran'ny fitaterana dia nanomana fitsipika vaovao taorian'ny fisondrotry ny lozam-pifamoivoizana nahafatesana tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny minisiteran'ny fitaterana dia nanomana fitsipika vaovao taorian'ny fisondrotry ny lozam-pifamoivoizana nahafatesana tato anatin'ny taona vitsivitsy. [More ...]
Ny tetikasan'ny rafi-pitaterana ao Bursa Urban dia tsy ao anatin'ny fandaharam-pandraisan'ny minisitera
Tetikasa rafi-pitaterana ao Bursa Urban dia tsy ao anatin'ny fandaharam-pitantanana; Na dia ny vaovao momba ny fiaran-dalamby hızlı kosa dia tonga amin'ny fandaharam-potoana, fa ny hany fanampiana izay antenain'i Bursa amin'ny Ministeran'ny Fitaterana dia tsy ny lamasinina. Ny masonay sy ny sofinay dia ao Ankara amin'ny tetikasan'ny fitaterana an-tanàna. [More ...]
Miparitaka ny fanaparitahana sary miaina avy any Metro Istanbul!
Lahatsary Manao tsiky avy any Istanbul Metro; Metro Istanbul, mpiara-miasa ao amin'ny Kaominina Metropolitan Istanbul, dia nizara horonantsary avy ao amin'ny kaontiny media sosialy nilaza fa tsy tokony “hanaparitaka ında amin'ny fitateram-bahoaka. Nizara avy ao amin'ny kaonty Twitter ofisialin'i Istanbul [More ...]
Agenda Trabzon Railway any TSIAD
Agenda Trabzon Railway any TSIAD; Ny fivorian'ny filankevitry ny Trabzon Industrialists sy ny Business People Association dia nanatrika ny fivoriana mpikambana ao amin'ny Trabzon Erzincan Railway Platform mpikambana, Ortahisar ary mpikambana ao amin'ny Filankevitra Metropolitan Mustafa Yaylalı. Filohan'ny TSİAD [More ...]
Fanatanterahana ny tetezana Melet ao Ordu; Tamin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra ao amin'ny Kaominina Metropolitan Ordu, ny trano vaovao natsangana teo amoron'ny Melet ao amin'ny distrikan'i Altınordu any Ordu, izay ivon'ny fifamoivoizana ao amin'ny Faritra Mainty Atsinanana amin'ny lalana Black Sea Coast. [More ...]
Famonoana ireo fiara fitaterana ao Tranzon
Famonoana ireo fiara fitaterana ao Tranzon; Raha ny fanadiovana anatiny sy ivelany ny fiara mitondra ny serivisy fitateram-bahoaka dia tanterahina tsy tapaka isan'andro ao anatin'ny kaominina Trabzon Metropolitan, ny torolàlana nataon'ny Ben'ny tanàna Metropolitan Murat Zorluoğlu [More ...]
Hafatra misy dikany avy amin'ny ankizy mandeha am-pianarana amin'ny bisikileta! 'Aza may ny solika, manosoa menaka!'
Hafatra misy dikany avy amin'ny ankizy mandeha am-pianarana amin'ny bisikileta! 'Aza may ny solika, manosoa menaka!'; Munzmir Metropolitan Munisipaly dia manohy ny fampielezan-keviny “Andao handeha any an-tsekoly ankizy Bisiklet. Taorian'ny mpianatry ny Kolejy Mavişehir Eraslan Karşıyaka Evin Leblebicioğlu Mpianatra sekoly ambaratonga faharoa [More ...]
Hohavaozina ny Courts Mechanical TCDD; 21 Febroary 2018 nisokatra ary nahazo tombony be dia be nataon'ny Tale Jeneralin'ny TCDD Transportation Inc. dia fitakiana famerenana indray ny lisitry ny mekanika. [More ...]
Ny fanalefahana ny tahan'ny tsy fananana asa dia amin'ny alàlan'ny fanavaozana
Young mpandraharaha Association of Turkey (TUGIAD) Filoha Anil Alirıza Şohoğl hita ao amin'ny fanazavana ny tarehimarika nampahafantatra tsi. Araka ny Turkstat ao Torkia sy ny 15 2019 taona ny isan'ireo tsy an'asa tamin'ny volana Aogositra [More ...]